Iblukhwe yesikhumba-Zonke izitayile ezibuyela ukuwa | IBezzia
USusana godoy | 08/10/2021 10:07 | Imizila
Ibhulukhwe yenye yeempahla ezintsha zeenkwenkwezi kwaye siyayazi. Kuyinyani ukuba xa kufikwa kubanda, amalaphu ayatshintsha ukuze akwazi ukuzifudumeza njengoko sinqwenela. Kodwa kukho enye engatshintshi kuba lonke ixesha lonyaka ubuya nathi kwaye siyonwabile ngalo: Ibhulukhwe yesikhumba.
Zibekwe njengenye yezo ngubo ziyimfuneko kuba zinayo Siza kwenza zonke iintlobo zezitayile kunye neembonakalo. Ukuze sikwazi ukuhamba nabo ukuya kwelona xesha lilungileyo lasemini kodwa nasebusuku. Ke, siyabona ukuba yingubo yenkwenkwezi kwaye ngoku kufuneka siyiqhelanise nobomi bethu. Ngaba siza kuqala?
1 Iibhulukhwe zesikhumba ezichanekileyo
2 Ibhulukhwe yeebhulukhwe emhlophe yesikhumba
3 Ibhulukhwe yemilenze ebanzi ngombala
Iibhulukhwe zesikhumba ezichanekileyo
Kukho iindlela ezininzi zeebhulukhwe esinazo ngokweendlela.. Kuba nangona sele sisazi ukuba siyasithanda isiphumo esinikwa lilaphu, ngoku kufuneka sibone ukuba singasinxiba njani kwaye ngawaphi amaxesha. Ayizukuba yinto entsonkothileyo ngazo zonke iindlela ezikhoyo esele zisinikwe ziivenkile zefashoni. Yiyo loo nto iivenkile ezinje ngeZara zihlala ziphakathi kwabokuqala ukukhetha ukuhlala zisibonisa ezona zilungileyo kwaye kule meko ibhulukhwe ethe tye.
Akunamandla kakhulu njengoko besinokucinga, kodwa ngokusika okuhle kakhulu okuvumela ukuba ukonwabele ukugqibezela usuku kunye nezona zihlandlo zikhethekileyo. Isinqe esiphakamileyo yenye yeempumelelo ezinkulu ukuze sikwazi ukufezekisa intuthuzelo esiyifunayo. Yiyo loo nto kwelinye icala, sisiphelo esiphumelele kakhulu ngeli xesha lonyaka. Kodwa kwelinye, ikwanabo bavulekileyo emaqatheni kunye nabo basishiyela iinkcukacha zemigca okanye iidolo ezimakwe kakuhle kwindawo engaphambili. Oku kuya kukunika ubuhle ngakumbi kwezo jongo zeofisi, umzekelo.
Ibhulukhwe yeebhulukhwe emhlophe yesikhumba
Ngaphandle kwamathandabuzo, kuya kuhlala kukho isitayile esisilindileyo kwaye ngenxa yoko, i-legging iya kuba yeyona ikhethekileyo. Kungenxa yokuba ukuba siyayicinga, iyakudityaniswa neembonakalo ezahlukeneyo kodwa zonke zikhululekile. Unokukhetha ukongeza ivesti kunye neblawuzi, zombini ezinxitywe ngeli xesha lonyaka. Okanye, hlala ngesikipa esibanzi neside esinokugubungela ilungu lomzimba wakho. Imilenze inokubonwa ngezihlangu okanye iibhutsi zamaqatha kunye nezihlangu zezemidlalo. Oko kukuthi, kuxhomekeke kwimpahla ephezulu oyikhethayo, ungazidibanisa njengoko uthanda.
Ibhulukhwe yemilenze ebanzi ngombala
Sele sine-one-one-one, kuba nangona isiphumo solusu sasidla ngokubonakala kumbala omnyama, ikwaguqukile. Ke kuhlala kungcono ukukwazi yonwabela izinto ezintsha kunye nokubonakala kwesitayile. Nangona umbala omnyama unokusidibanisa kunye nazo zonke ezinye, asinakho ukushiya ecaleni ezinye i-shades ezinje ngombala obomvu. Kuba siyazi ukuba yenye yezona zinto zinomdla kwaye baya kunika amandla ebusika. Yiyo loo nto kufuneka ihlale inathi. Ewe ukuthetha ngee-shades, iithoni ezimdaka zezinye zezona zinto zisisiseko ngeli xesha lonyaka litsha.
Ke, ngoku unokukhetha phakathi kombala osisiseko omnyama, obomvu, omdaka kwaye ngokuqinisekileyo uya kufumana okuluhlaza okotshani. Zonke ziya kuba kwicala lakho ukuze zikunikeze ngezona ndlela zintle. Kule meko sishiyeke kunye iibhulukhwe ezinqeni eziphezulu ukongeza ekubeni nomlenze obanzi. Kubonakala ngathi umbono ngamanye amaxesha uhlala kwiindlela zanamhlanje. Ngenxa yoko, awunakuba ngaphandle kwebhulukhwe yesikhumba, nokuba ujonge phi. Ngaba yingubo yakho yenkwenkwezi yexesha?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » fashion » Imizila » Zonke iintlobo zeebhulukhwe zesikhumba ezibuyela ekuweni
Iingcebiso ezi-3 zokunqamla kwiselfowuni